छोरीको चिठी गुगललाई-NepalKanoon.com
छोरीको चिठी गुगललाई
असार ११, काठमाडौँ । ‘प्यारो गुगल मेरो बुबा तपाईकहाँ काम गर्नुहुन्छ । सातामा उहाँले पाउने भनेको छुट्टी शनिबार एक दिन मात्र हो । यसपालि बुवालाई अर्कै दिन छुट्टी चाहिएको छ । कृपया उहाँलाई बुधबारको दिन छुट्टी मिलाइदिनु न!
यो हो सानी नानी क्याटीले आफ्ना पिता काम गर्ने गुगल लाई लेखेको चिठ्ठी । हिलेकाहीँ सानोतिनो पहलले पनि मिठो पुरस्कार पाउँछ । यस्तै भएको छ. सिलिकन भ्याली का नामले प्रख्यात अमेरिकी सहर सान फ्रान्सिस्कोस्थित इन्टरनेट कम्पनी गुगलका कर्मचारीलाई । छोरी क्याटीले लेखेको बालसुलभ चिठीका कारण गुगलका एक कर्मचारीले एक साता छुट्टी पाएको समाचार हफिङटन पोस्टलाई उदृत गर्दै नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
क्याटीले इन्टरनेट संसारमा प्रसिद्ध कम्पनी गुगलमा काम गर्ने आफ्ना बुवाको जन्मदिन मनाउन साप्ताहिक बिदा बाहेक एक दिन छुट्टी माग्दै बुवाका हाकीमलाई चिठी पठाएकी हुन् ।